जानिराख्नुस् तिल खानुको यति धेरै फाइदाहरु । – Yuwa Aawaj
जानिराख्नुस् तिल खानुको यति धेरै फाइदाहरु ।
चैत्र १९, २०७७ बिहिबार 420
काठमाडौ : स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि तिलको ठूलो महत्व छ । तिलमा पाइने पु’ष्टिकारक तत्वले शरीरलाई चु’स्तदुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ ।तिलमा पाइने लेसि’थिन दिमाग र आँखाका लागि लाभदायक हुन्
तिलमा पाइने सेसामोल नामक तत्वले डिएनएलाई परावैजनी किरणजन्य हानिबाट जोगाउँछ ।तिलका गेडामा फाइबर हुन्छन् जसले स्वस्थ पाचन प्र’णाली बनाउनका लागि मद्दत गर्छन् । तिलको नियमित सेवनले क’ब्जियत हुन दिँदैन ।
तिलका गेडामा पाइने म्याग्ने’सियमले श्वासप्र’श्वासमा हुने ऐंठन हटाएर दम लगायतका रोग लाग्न दिँदैन ।तिलका गेडामा पाइने तामाले बाथजन्य पी’डा घटाउँछ । यसले रक्त’कोषिका, हड्डी र जो’र्नीहरूलाई बलियो बनाउँछ ।
यो पनि :हाडजो’र्नीमा समस्या छ ? खानामा समावेश गर्नुहोस् यी चिजहरू !!:जाडो मौसममा प्रायः मानिसहरूलाई हाडजो’र्नी धेरै दुख्छ । हाडजोर्नीको समस्याले तपाईँको दैनिक काममा बाधा पु¥र्याउनाले जीवनशैलीमा नै प्र’भाव पार्दछ ।
यो समस्या एक उमेरपछि मात्र देखा पर्दछ। धेरै मानिसहरू जाडो मौसममा संयुक्त दुखाइको गु’नासो गर्छन्।जब जोड़ दुखाइ वा गठिया को समस्या हुन्छ, पूरै जीवनशैली गड’बडी हुन्छ। तर यदि हामीले शुरूमा यो पी’डा महसुस ग¥र्‍यौं र यसको उपचार शुरू गर्यौं भने, यो बढ्नुभन्दा नियन्त्र’णमा रहन्छ।
हाडजो’र्नी दु’खाइबाट राहत पाउन, चि’कित्सा उपचार बाहेक, हाम्रो घरमा यस्तै धेरै चीजहरू छन्। ती चीजहरूको सेवनले हामी यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।
तपाईंले सुन्नुभएको होला कि स्वस्थ आहारले व्यक्ति स्वस्थ रहनमा ठूलो भूमिका खेल्छ।
यदि हाम्रो खाना स्वस्थ र पौ’ष्टिक छ भने हामी धेरै रोगहरूको जो’खिमबाट पनि बच्दछौं। पौ’ष्टिक तत्वहरू हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि आवश्यक हुन्छ। हामी पौष्टिक अभाव पूरा गर्न आहारमा यस्ता धेरै चीजहरू समावेश गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई स्वस्थ राख्न पनि मद्दत गर्दछ।
त्यसो भए हामी तपाईंलाई त्यस्ता खाद्य प’दार्थहरूको बारेमा बताउँछौं जसले हाडजो’र्नीको दुखा’इ कम गर्दछ।मेवा स्वास्थ्यको लागि धेरै ला’भदायक मानिन्छ। जाडो मौसममा बदाम खानु धेरै फाइदाजनक मानिन्छ। लसुनको सेवनले जोड़ दु’खाइ कम गर्दछ।
१. मेवा:मेवा स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ। मेवामा फाइबरको मात्रा धेरै पाइन्छ । यस बाहेक मेवामा भिटामिन सी पनि राम्रो मात्रामा पाइन्छ। जसले रोग प्रति’रोधात्मक क्षमताको साथ साथै संयुक्त स्वास्थ्य र पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
२. बदाम:जाडो मौसममा बदाम खानु धेरै फाइदाजनक मानिन्छ। बादाममा पाइने ओमेगा–३ फ्याट्टी एसि’डले सूजन र गठियाको लक्ष’णहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यस बाहेक, जाडोमा बदामले शरीरभित्रबाट तातो राख्न मद्दत गर्दछ।
३. लसुन:लसुन खाना पकाउन स्वादको लागि प्रयोग गरिन्छ। यति मात्र होइन, लसुन स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै लाभदायक मानिन्छ। लसुनको प्रयोगले हाडजोर्नी दुखाइमा धेरै राहत दिन्छ। लसुनमा त्यस्ता धेरै तत्वहरू फेला परेका छन् जसले जोड़ दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ।
४. ब्रोकाउली:ब्रोकाउली त्यस्तै एक तरकारी हो जुन स्वास्थ्य गुणहरूले भरिएको हुन्छ। ब्रोकाउलीमा क्या’रोटीनोइड लुटेन भनिने तत्व हुन्छ। जसले लामो समयसम्म संयुक्त स्वास्थ्य कायम राख्न र पी’डामा राहत प्रदान गर्न काम गर्न सक्दछ।
यो कुनै पनि माध्यमबाट योग्य चि’कित्सा रायको लागि विकल्प होईन। अधिक जानकारीको लागि सँधै विशेषज्ञ वा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। ब्राइट नेपाल बाट
Prevग्या’स्ट्रिक,क्या’न्सर लगायत धेरै रोगका लागि उपयोगी सुकमेल, यस्ता छन् अचम्मैको फाइदाहरु !
Nextहार्दिक बधाई ! घु’स अस्वी’कार गर्ने ३४ जना ट्राफिक प्रहरी सम्मानित ।
बैदेशिक रोजगारमा जानेले खो’प लगाउन के के डकुमेन्ट चाहिन्छ ?
बधाई ! अंशु गुरुङ बनिन् बेलायती सेनाको क्याप्टेन ! सेनाको क्याप्टेन हुने उनी पहिलो नेपाली महिला !
नेपालले कहिले खेल्छ विश्वकप फुटबल ? यसो भन्छन् किरण !